राष्ट्रपति चुनाव परिणाम : ट्रम्पकाे पार्टीमै मतभेद, भएकै हाे त धाँधली ?
२४ कार्तिक २०७७, सोमबार १२:१६ मा प्रकाशित
२०७७ कार्तिक २४ साेमबार, एजेन्सी । अमेरिकामा राष्ट्रपति पदको चुनावकाे नतिजालाई लिएर डाेनाल्ड ट्रम्पकै पार्टीभित्र मतभेद देखिएकाे छ ।
पूर्व राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले डेमोक्र्याटका जो बाइडेनलाई उनको जीत भएकाे भन्दै बधाई दिएपछि पार्टीभित्र मतभेद देखिएकाे हाे । यसअघि ट्रम्पले धाँधली भएकाे आरोप लगाएका थिए । तर जर्ज डब्ल्यू बुशले भने निर्वाचन निष्पक्ष भएको भन्दै बधाई दिए । तर रिपब्लिकन पार्टीका अन्य ठूला नेताहरूले राष्ट्रपति ट्रम्पको पराजयलाई अझै स्वीकार गरेका छैनन् ।
प्रतिनिधि सभामा पार्टी नेता केविन म्याकार्तीले भनेका छन् कि सबै कानुनी चुनौतीलाई पहिले विचार गर्नुपर्छ । उही समयमा राष्ट्रपति ट्रम्पले अझै पनि ट्विटरमा दावी गरिरहेका छन् कि मतदानमा धाँधली भएको थियो र चुनाव परिणाम ‘चोरी’ भयो ।
यद्यपि ट्विटरले उनको दावीलाई ‘विवादित’ भनेर वर्णन गरेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले धेरैलाई ट्वीट गरेका थिए, जसमा लेखिएकाे थियाे- “हामी विश्वास गर्दछौं कि यी मानिसहरू चोरहरू हुन् …. यो एक चाेरिएकाे चुनाव थियो ।”
यद्यपि रिपब्लिकन पार्टीका धेरैले राष्ट्रपति चुनावको नतीजा स्वीकार्न अनुरोध गरिरहेका छन् ।
२००० को चुनावमा जर्ज डब्ल्यू बुशको तर्फबाट फ्लोरिडामा मत गणना गर्न कानुनी रणनीति बनाउने वकिल बेन जिन्सबर्गले अमेरिकी टिभी च्यानल सीबीएसलाई भनेका थिए- “ट्रम्पले थोरै कुर्नुपर्छ, नतिजा हेर्नुहोस् ।”
राष्ट्रपतिलाई सीधा सम्बोधन गर्दै उनले भने, “यो प्रजातन्त्र हो । यो एक देश हो जुन तपाइँको लागि धेरै राम्रो भएको छ । तपाईँले गर्नुपर्ने कुरा भनेको संस्थालाई सम्मान गर्नु हो र ती मध्ये सबैभन्दा ठूलो संस्था भनेको हाम्रो चुनाव हो जसले शान्तिमय शक्ति हस्तान्तरण गर्दछ । र तपाईं यसलाई नष्ट गर्न सक्नुहुन्न ।”